Meelaynta Horukacsan - Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale
Barnaamijka Meelaynta Horukacsan (AP) ee Robbinsdale Area Schools waa mid ka mid ah barnaamijyada AP ee ugu weyn gobolka Minnesota. Barnaamijku waa barnaamij iskaa wax u qabso ah oo ardayda siiya fursad ay ku qaataan hal ama in ka badan oo koorsooyin heer jaamacadeed ah iyagoo weli ku jira dugsiga sare. Ardaydu waxay kala dooran karaan koorsooyin iyo imtixaanno kala duwan oo 22 maaddo ah, oo ay ku jiraan farshaxanka, sayniska kombiyuutarka, juqraafiga, dawladda iyo siyaasadda, aragtida miyuusigga, luqadaha adduunka iyo inbadan. Koorso kastaa waa khibrad waxbarasho oo u gaar ah taas oo ardaydu ka sahamiyaan maadooyinka dhinacyo kala duwan — oo ay ku jiraan kuwa ay iyagu leeyihiin. Ardayda baaritaanka leh, AP waxay taabaneysaa aqoon caalami ah oo laga yaabo inay ahaato mid aan wali lagu baran dugsiga sare.
Qaadashada koorsooyinka AP waxay ka caawin kartaa ardayda inay bartaan caadooyinka, xirfadaha maaraynta waqtiga iyo xirfadaha fekerka muhiimka ah ee loo baahan yahay si loogu guuleysto kuleejka. Ardaydu waxay xoojin doonaan xirfadaha qorista, xirfadaha akhriska ee sheekooyinka khayaaliga ah, iyo xirfadaha xalinta dhibaatooyinka. Iyada oo ku saleysan buundooyinka AP Imtixaannada, la bixiyo bisha Maajo ee sannad kasta, ardaydu waxay kasban karaan buundada kulliyadda, meeleynta sare ee kulliyadda, ama labadaba. Ku kasbashada buundada kulleejada dugsiga sare waxay keydineysaa lacag, waxayna siineysaa ardayda kuleejka fursad ay ku qaataan shaqooyin heer sare ah oo sare, horay u qalin jabiyaan, ama waxbarasho dibadda ah.
Si ka duwan wax u baro. Raadi xiisahaaga. Bal qiyaas oo guuleysta. Naftaada la tartan.
Imtixaannada AP / Imtixaannada AP
AP Capstone waa waddo ay ardaydu ugu horumariyaan aasaaska hodanka u ah daraasadaha tacliimeed ee mustaqbalka waxayna u aqoonsadaan ardayda cilmi-baaristooda, qoristooda iyo kartidooda fekerka muhiimka ah. Si loo kasbado Dibloomada AP Capstone, ardaydu waxay qaataan koorsooyinka AP Seminar iyo AP Research, waxayna kasbadaan ugu yaraan 3 meelood 5kiiba imtixaankooda ama mashruuca koorsada. Intaa waxaa sii dheer, ardaydu waxay qaataan ugu yaraan afar imtixaanno AP ah oo dheeri ah waxayna kasbadaan ugu yaraan 3 ama ka sareeya midkiiba.
Ardayda dhammeeya Seminaarka AP iyo AP Research oo kasbada 3 ka mid ah labaduba waxay xaq u leeyihiin Shahaadada Cilmi-baarista AP iyaga oo aan qaadin imtixaannada AP ee dheeri ah. Labada fasalba waxay raacaan waxbarista QUEST, oo u taagan Su'aalaha, Fahamka, Qiimeynta, Wadajirka iyo Wadajirka / Sheegista. Fasalladu waa fursad aad u fiican oo ay ardaydu u sahamiyaan arrimaha dunida dhabta ah dhinacyo badan (dhaqan, taariikhi, deegaan, cilmi, farshaxan, iwm) iyo inay noqdaan feker muhiim ah oo diyaar u ah inay ku dhex barbaaraan bulshooyinka adduunka. Ardaydu waxay akhrin doonaan qoraallo kala duwan, laga soo bilaabo khayaaliga illaa taariikhda iyo suugaanta inta lagu jiro koorsada.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koorsooyinkan waxaad ka heli kartaa bogga Guddiga Kulliyadda AP.
Inta badan sida koorsada aqoon-isweydaarsiga ee ardayga koowaad ee kulleejada, koorsadani waxay si weyn diiradda u saareysaa fahamka iyo falanqaynta qoraallo kala duwan oo kala duwan iyo riixitaanka fekerka muhiimka ah iyadoo loo marayo dood, milicsiga iyo qorista. Ardayda waxaa lagu qiimeeyaa bandhig kooxeed, bandhig shaqsiyeed iyo waxqabadkooda imtixaanka AP ee koorsada guga. Koorsadani waxay buuxineysaa shuruudaha Ingiriisiga ee fasalka 11aad.
Koorsadani waxay sii dheereyneysaa shaqadii lagu qabtay AP Seminaarka waxayna markale sahaminaysaa qoraalo kala duwan oo dhinacyo badan laga eego. Mashruuca ugu dambeeya ee koorsada waa warqad cilmi baaris shaqsi ah oo ka kooban 20 + bog iyo difaac afka ah ee shaqadaas guddi tacliimeed.
Muxuu ardaygaygu u qaadanayaa koorsooyinka AP?
Kugu siin karnaa gebogebo ku saabsan arjigaaga kuleejka.
Lacag ayaa kuu badbaadinaysa waxbarashada kuleejka.
Waxay kaa caawineysaa inaad ku horumariso kartidaada fasalka iyo wixii ka dambeeya.
Waxay kaa caawinaysaa inaad dhisatid caadooyin wanaagsan oo waxbarasho.
Waxay kaa caawinaysaa inaad hagaajiso xirfadahaaga qorista.
Waxay kaa caawineysaa inaad qaabeyso yoolalkaaga.
Caqabad baa kugu ah, laakiin sidoo kale waxay kaa dhigeysaa inaad ogaato inaad ka fiicnaan karto haddii aad maskaxdaada saarto.
Ma AP keliya ayaa loo xulay koox arday ah?
Runtu waxay tahay, fasalada AP way ka adag yihiin fasalada caadiga ah. Waxay ku lug leeyihiin u fiirsasho qoto dheer, iyo waqti iyo tamar badan, ardayduna waa inay la kulmaan rajooyin sare. Qof kasta oo diyaar u ah inuu aqbalo loolanka una shaqeeyo si adag wuxuu ku guuleysan karaa AP.
Sideen ku ogaan karaa haddii aan diyaarsado koorso AP ah?
Kahor intaadan is qorin, hayso fikrad wanaagsan haddii aad xamili karto shaqada dheeriga ah. Fasallada AP-gu si dhakhso leh ayey u socdaan oo ay daboolaan dhul badan. Diiwaankaaga ku-guuleysiga koorsooyinka kale waxay ku siin doontaa hagitaan lagu hagaajinayo kartidaada AP. "Haddii aad ku adag tahay maaddo gaar ah, markaa ha baqin, horay u soco," ayuu yiri arday AP ah, "maxaa yeelay waxaad ku kalsoonaan kartaa xirfadahaaga aasaasiga ah inaad si wanaagsan uga soo baxdo fasalka AP."
Immisa koorso AP ah ayaan qaataa?
Caqliga saliimka ahi ha kuu ahaado. Qaado tirada koorsooyinka AP ee aad isleedahay waad xamili kartaa. Xusuusnow: Shaqada guriga ee AP waa mid aad u baahan. “Fasalka AP laga yaabee inuusan ku siin doonin saacad mashquul ah,” ayuu yiri arday AP ah. "Macallinka AP wuxuu kaa fili doonaa inaad saacaddaas ku qaadato inaad ka fikirto - waqtiga ugu badan ee aad u baahan tahay inaad dhammaystirto hawsha."
Waa maxay Imtixaanka AP?
Imtixaannada AP waxaa la qaadaa bisha Maajo. Caadi ahaan waxay soconayaan seddex saacadood waxayna ku lug leeyihiin su'aalo iyo xulashooyin badan oo la doorto iyo dhibaatooyin. Imtixaannadu waxay cabbiraan xirfadaha sababaynta iyo awoodda aad u leedahay inaad falanqeyso xaqiiqooyinka iyo xogta, soosaarista macluumaadka, aad uga fikirto arrimaha qallafsan, kala xaajoodto aragtiyada tartamaya, oo aad si cad oo dhammaystiran u qorto.
Miyay tahay inaan qaato Imtixaanka AP haddii aan koorsada qaato?
Imtixaanada AP maahan shuruudo looga baahan yahay dhammaan dugsiyada, laakiin ardayda AP badankood ayaa qaata. Waxaa jira fursad wanaagsan oo aad ku kasban karto dhibcaha kulliyadda adoo si fiican u dhalinaya, markaa waxay bixineysaa maalgashi dhowr saacadood ah iyo khidmadda imtixaanka, taas oo suurtagal ah in la dhimo ama laga tanaasulo. Arday badan ayaa ku fiicnaada imtixaannada oo waxay xaq u yeeshaan amaah ama meelayn kumanaan kulliyado iyo jaamacado adduunka ah. Iyo haddii aad ka fekereyso inaad wax ku barato dibadda, in ka badan 600 jaamacadood oo ku yaal in ka badan 40 waddamo kale ayaa aqoonsan Imtixaannada AP.
Imtixaan kasta oo AP ah waxaa lagu qiimeeyaa iyadoo la adeegsanayo cabir shan-dhibcood ah:
5 - Aad u aqoon fiican
4 - Aqoon fiican
3 - U qalma
2 - Suurtagalnimo
1 - Talo la’aan
Imtixaanka AP ee ah 3 ama wixii ka sareeya ayaa kuu qalmi kara amaahda kulliyadda inta badan kulliyadaha iyo jaamacadaha Mareykanka.
Imtixaannada badankood waxay qaadanayaan laba illaa saddex saacadood in la dhammaystiro. Maaddooyinka u dhigma koorsooyinka kulleejada ee nuska-sano ah, imtixaanku wuxuu ku dhow yahay laba saacadood oo dherer ah.
Ardayda dhibcaha gaarka ah sifiican uga dhaliya imtixaanada AP waxay xaq u yeelan karaan inay kasbadaan magacaabista AP Scholar ee Guddiga Kulliyadda. Magacaabista AP Scholar waa habka ay Gudiga Kulliyaddu u aqoonsadaan ardayda "ku soo bandhigtay waxqabad heer jaamacadeed ah koorsooyinka iyo imtixaanada AP," sida lagu qoray bogga AP . "Inkasta oo aysan jirin abaalmarin lacageed, marka lagu daro helitaanka shahaadada abaalmarinta, guushaan waxaa lagu qirayaa warbixin kasta oo AP Grade Report ah oo loo diro kulleejooyinka deyrta soo socota." Waxaa jira shan heer guul oo kala duwan:
Aqoonyahan AP : Waxaa la siiyaa ardayda hela darajooyinka 3 ama wixii ka sareeya seddex ama in ka badan oo ah Imtixaannada AP.
Aqoonyahan AP oo leh Sharaf : Waxaa la siiyaa ardayda hela celcelis darajo ah ugu yaraan 3.25 dhammaan Imtixaannada AP ee la qaatay, iyo darajooyinka 3 ama ka sarreeya ee afarta ama in ka badan ee imtixaannadan.
Aqoonyahan AP oo leh Kala-saar : Waxaa la siiyaa ardayda hela celcelis darajo ah ugu yaraan 3.5 dhammaan Imtixaannada AP ee la qaatay, iyo darajooyinka 3 ama ka sarreeya ee shan ama in ka badan oo imtixaannadan ah.
Aqoonyahan AP oo heer qaran ah : Waxaa la siiyay ardayda ku nool Mareykanka ee hela celcelis ahaan ugu yaraan 4 dhammaan Imtixaannada AP ee la qaaday, iyo darajooyinka 4 ama ka sareeya ee sideed ama ka badan imtixaanadan.
Haddii ardaygaagu xiiseynayo qaadashada koorsooyinka AP, fadlan la hadal la-taliyaha dugsigaaga ama la xiriir:
Isuduwaha AP, Dugsiga Sare ee Armstrong
Isuduwaha AP, Dugsiga Sare ee Cooper
Kari_Christensen @ rdale.org | 763-504-8913